Kambodza: Nomem-boninahitra Tamin’ny Loka Ilay Afaka Tamin’ny Fanandevozana Ara-nofo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Febroary 2018 3:22 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Italiano, Swahili, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, Español, English
(Tamin'ny 22 Oktobra 2009 no nanoratana ny lahatsoratra teny Anglisy)
13 taona i Sina Vann raha tonga tany Kambodza avy any Vietnam mba hanao vakansy araka ny noeritreretiny. Namidy ho andevo ara-nofo anefa izy, ary tao amin'ny trano iasan'ny mpivaro-tena izy no niaina nandritra ny roa taona. Afaka izy rehefa nikarakara bemidina tao amin'ny trano iasan'ny mpivaro-tena an'i Vann i Somaly Mam, mpikatroka mpanohitra ny fanandevozana sady solontenan'ny Orina Mpanasoa Somaly Mam. Mpikatroka miaraka amin'ny Orina Mpanasoa Somaly Mam i Vann ankehitriny, manampy ireo olona afaka tamin'ny fanandevozana sy ireo izay mbola miasa any amin'ny tranon'ny mpivaro-tena ihany koa izy.
Noho ny asa nataon'i Vann dia nomem-boninahitra tamin'ny Loka Frederick Douglass izy. Ny Loka Frederick Douglass “Manome voninahitra ny zotom-po goavana amin'ny finiavan'ny olombelona ary mandrisika ny ankamaroan'ireo afaka tamin'ny fanandevozana amin'izao andro izao mba hanampy ny hafa ho amin'ny fahafahana.”
Hita ato amin'ity lahatsary ity ny tantaran'i Vann maromaro:
Ny Mpandresy tamin'ny Loka Frederick Douglass Taona 2009 – Sina Vann avy amin'ny Free the Slaves ao amin'ny Vimeo.
Nohitarin'ny Firenena Mikambana herintaona ny fe-potoana iasan'izy ireo izay mamaha ny olan'ny zon'olombelona ao Kambodza. Araka ny nohazavain'ny The Mirror, ny iraka manokan'ny Firenena Mikambana, tamin'ny Vaomieran'ny Zon'olombelona:
raha naneho ny ahiahiny mikasika ny toe-draharahan'ny zon'olombelona ao Kambodza. Araka ny tatitra nataony, goragora ny fanarahan-dalàna ao Kambodza … Ankoatra izay, nanamarika ny raharahan'ilay parlemanteran'ny Antoko Sam Rainsy izy – avy amin'ny antoko mpanohitra lehibe indrindra ao Kambodza – Ramatoa Mu Sochua, izay nogadrain'ny fitsarana fehezin'ny governemantan'ny Antokom-bahoaka Kambodziana, mba ho resy tamin'ny fomba tsy ara-drariny satria sahy nanohitra ireo mahery tao Kambodza.
Nandrisika ny iraka manokana mba tsy hanadino ireo vehivavy sy ankizy izay mbola tavela any amin'ny fanandevozana ara-nofo any Kambodza ny hafa, ary nanamarika fa tsy maintsy atao laharam-pahamehana hatrany ny zon'olombelona na dia misy aza ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona hafa, toy ny fahalalahana maneho hevitra,